July 22, 2013 – democracy for burma
Taungup residents arrested in Muslim murder case
On July 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
( Taungup, 18 July 2013): The Arakan police have arrested six residents of Taungup,atown located at southern part of Arakan with the suspicion of killing ten Muslim pilgrims last year in the town. The news of the arrest of six persons was confirmed by U Tin Thein Aung,aTaungup based politician.
“I come to know about the arrest of6persons on Thursday morning. But they were actually arrested by the midnight of Wednesday. I got the information as the arrested persons were brought to Thandwe prison in the morning,” said U Tin Thein Aung.
The arrested persons have been identified as U Thein Maung (alias Tun Naing), Ko Wing (alias Maung Pu), Pauk Sin (alias Tun Myint), Ko Thein Shwe Maung, U Tun Kyaw and U Tun Win.
The Taungup based politician did not cite any concrete reason for the arrest but he assumed that they have been arrested by the authority for their suspected roles in sensational murdering of ten Muslims on2June 2012.
The incident of killing ten Muslim pilgrims in Taungup after they were dragged out fromabus byafurious mob was an immediate after affect of the rape & murder episode of an Arakanese young woman by three Muslim goons that took place Rambre township of Taungup locality. The bus was on the way to mainland Burma from Thandwe and it happened while the bus was crossing the town.
Following the arrest of six residents, the security has been tightened in Taungup. Additional security forces have been deployed by the authority in many key places of the locality and the situation remains peaceful.
Sense of insecurity prevails in western Burma, Six government workers face dismiss
On July 22, 2013 July 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
News | July 19, 2013, 1:08 pm
Sitwe_ 19 July 2013
Six government workers have been fired from their jobs in western Burma following their refusals to join duties in rural worksite for the security reason.
The dismissed employees were working in the Agriculture Mechanization Department under Arakan Agriculture & Irrigation Ministry, said one of the drive-out workers.
U Aung Tun Thein, who wasasenior tractor driver in the department with 28 years long service record informed that they were fired from their jobs on 23 June by an order of U Bo Bo Aung, director of Agriculture Mechanization Department based in the Arakan capital city Sittwe.
Besides U Aung Tun Thein, the other five dismissed tractor drivers are U Tun Win, U Tin U Latt, U Kyaw Myo Win, U Myo Min Tun and U Tun Aye Kyaw.
According toasource closed to the workers, all the six tractor drivers of the agricultural department were asked to harrow an area of 300 acres by their tractors in Pauktaw township. But the drivers refused to obey the order citing the reason that the plot was nearer toaMuslim refugee camp in Kyini Byint.
But initially the drivers went to the locality for ploughing the land and worked for one day. However they were later escorted by three soldiers apprehending unpleasant incidents there. Thus their mission in the first week of June came to an end because of the security reason. Continue reading “Sense of insecurity prevails in western Burma, Six government workers face dismiss” →
Security officials: Still no information on North Korean hostages
PANGLONG NEWS 17.JULY 2013
Burmese officials on the hunt for North Korean hostages in Tachilek, opposite Thailand’s Chiang Mai, say they still have no news on their presence in Burmese soil.
“The last we heard of North Koreans on their way to Thailand was4years earlier,”asecurity officer who asked not to be named told SHAN. “They had mistaken the Burmese shore north of Tachilek for Thai territory and had embarked there. We told them to return to where they came from.”
The Mekong, beginning from China and flowing past Burma and Thailand in the West and Laos and Cambodia in the West to Vietnam into the Pacific, has long beenameans of travel and transportation for people in the region especially after its rapids were demolished by the Chineseadecade earlier.
Apart from the Burma Army, there are Burma Army-run People’s Militia Forces (PMFs) and Border Guard Force (BGF) 1008 and elements of the United Wa State Army (UWSA) active in the area.
Burmese officials interviewed by SHAN also maintained that there are no poppy fields in areas northeast of Tachilek. SHAN’s Shan Drug Watch researchers have reported existence of poppy fields northwest of Tachilek. “It’s beenafew years since we have received any reports of poppy fields in the northeast,” saidaresearcher.
The Burmese officer interviewed by SHAN wondered whether the 64 North Koreans as reported by AFP on 13 July were actually in the neighboring territory, meaning Laos.
Burma, Laos and Thailand meet at what is now known as the Golden Triangle.
U WIRA THU: ” ဟန်နာဘိခ်ျ (Hannah Beech) ချစ်သည့် လူနည်းစု၏ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ရပ်များ စပြီ “
On July 22, 2013 July 23, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
” ဟန်နာဘိခ်ျ (Hannah Beech) ချစ်သည့် လူနည်းစု၏ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ရပ်များ စပြီ ”
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၃၆လမ်း၊ ၈၄×၈၅ လမ်းကြား၊ တရားပွဲကို ယနေ့ 21.7.2013 ရက်နေ့ ည 8:35 နာရီတွင် စတင်ဟောကြားသည်။
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း နာယက အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဦးဝီရသူက “ဆွေမျိုးဆိုတာ များလေကောင်းလေ” တရားဟောကြားနေစဉ် ၉း၀၀ နာရီခန့်တွင် တရားမဏ္ဍပ်နောက်ကျောမှ ရုတ်တရပ်ပေါက်ကွဲမှုကြီး တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ဦးဝီရသူက တရားဆက်မဟောဘဲ ရပ်ထားလိုက်သည်။
Extremists attack Ven. Wirathu’s sermon
ဟိုဟိုဒီဒီလှည့်ပတ်ကြည့်နေစဉ် တရားနာပရိသတ်များမှ ဆရာတော်ကို ပစ်တာ “အောက်ကိုဆင်းပါဘုရား အောက်ဆင်းပါဘုရား” ဟု အော်ဟစ်လျှောက်ထားကြ၍ ပလ္လပေါ်မှဆင်း၍ စင်ပေါ်တွင် ခဏထိုင်နေခဲ့သည်။
သံဃာတော်တ်ာများ အမျိုးသားများ စင်ပေါ်တက်လာပြီး ဦးဝီရသူကို ၀န်းရံကာကွယ်ထားကြသည်။
နိဗ္ဗာန်ဆော်မှ ကားဘီးပေါက်သည်ဟု ကြေညာသည်။ ဦးဝီရသူ တရားပြန်ဟောသည်။
တရားနာပရိတ်သတ်များ သုံးပုံတစ်ပုံသာ ကျန်တော့သည်။ ပလ္လင်နောက်ကျောမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေဆဲ။
ရေစက်ချ အမျှဝေအပြီး တရားနာပရိသတ်များက ၀န်းရံကာ အနီးရှိ သစ္စပါရမီ တိုက်အိမ်ထဲ ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ပရိသတ်ရှေ့ဆုံးမှ နာယူနေသော မပန်းနုအောင် အသက် (၂၁) နှစ် ညာဘက်ခြေထောက်ထိမှန်သွား၍ ပတ်တီးစည်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိမှန်စဉ် မနာကျင်၊ နောက်မှ ပူလောင်နာကျင်လာ၍ ဆေးခန်းသွားပြခဲ့ကြောင်း လျှောက်ထားသည်။
အဖွားကြီးတစ်ယောက် ပေါင်ရင်း ဗုံးစထိမှန်သွားသည်။
မြတောင်တိုက် ခေမာဝန်းကျောင်း မှ ကိုရင်ပညာသာမိ ပေါင်နှင့် ဒူးခေါင်ဒဏ်ရာရသွားသည်။
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ဃသ(၁၃)ရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ် က(၃၀)နေ (အသံချဲ့စက် ဆရာ) ဦးကျော်ဝင်း (၃၆)နှစ် ခါးမှာ ဒဏ်ရာရသွားသည်။
ခဲယမ်းအစအနလေးများ အသားထဲစူးဝင်နေ၍ ၀ိုင်းဝန်းဖယ်ရှားပေးရသည်။
တရားပလ္လင်နောက်ကျောတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဗီနိုင်းစ အစအန ထိမှန်ပေါက်ပြဲသွားသည်။ SE ကားဖြူ နောက်ဘီး နှစ်ဘီးနှင့် ရှေ့ဘီး ညာဘက်ဘီး ထိမှန်ပေါက်ကွဲသွားသည်။ ကားအောက် ဆီတိုင်ကီ ယိုစိမ့်ထွက်ကျလာသည်။ ကားမှန်ပေါက်ပြဲ၊ ကားနောက်ခန်းဘေး အစအန ထိမှန်ပေါက်ပြဲသွားသည်။
ပေါက်ကွဲရာနေရာလမ်းမပေါ်တွင် ချုိုင့်ငယ်တွင်းငယ်တစ်ခုလို ချိုင့်ဝင်သွားသည်။
၅င/၈၆၆၅ နောက်ပိုင်း ကိုယ်ထည် ယမ်းအစအနများ စင်၍ ပေါက်ပြဲသွားသည်။
ဦးဝီရသူ အပြန်အတွက် ကားတစ်စင်း သီးသန့်စီစဉ်ရင်း ဦးဝီရသူ၏ တပည့် လူငယ်နှစ်ယောက်နှင့် တရားပွဲပင့်သူ လူငယ်အချို့ စကားများကြ၍ ပရိသက် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ထပ်ဖြစ်သည်။
လုံခြုံရေး အရ ကားကိုစစ်ဆေးရာမှ စကားများရင်း လက်ပါသွား၍ ဦးဝီရသူ၏ တပည့် မောင်ဆံရှည် လက်သီးနှင့်အထိုးခံရသည်။
ကိုပြာလောင် ခြေနှင့် အကန်ခံရသည်။
နောက်ဆုံး ဦးဝီရသူ၏ ဒကာရင်းကားဖြင့် လာကြို၍ ကျောင်းသို့ ချောမောစွာ ပြန်ရောက်သည်။
၁၀း၃၀ နာရီ တရားပွဲပြီး၍ ၁၁း၀၀ နာရီမှ ကျောင်းရောက်သည်။
ယခု ည ၁၁း၃၀ နာရီအထိ ပေါက်ကွဲနေရာတွင် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီး ကြိုးဝိုင်းထားကာ သေချာစစ်ဆေးနေပြီး၊ မပန်းနုအောင် ခြေထောက်ထဲ ယမ်းစနှုတ်မရ၍ ဆေးရုံကြီး OPT သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းအရ ယ္ခုည ၁၂း၀၅ နာရီတွင် အောင်မြေသာဇံမှ ဒေါ်အေးခင်၊ အမည်မသိ အမေကြီးတစ်ဦး၊ ကိုရင်ပညာသာမိ၊ ဦးကျော်ဝင်း (အသံချဲ့စက်ဆရာ)၊ မပန်းနုအောင် တို့ ဆေးရုံတက်နေကြောင်း၊ သိရသည်။
National race protection law :More than two million signatures have reportedly been received from the public
At present, petitions for the proposed national race protection law are being collected across the country. More than two million signatures have reportedly been received from the public so that the draft law can be forwarded to Parliament.
Myanmar’s Lower House speaker saidanational race protection law would be considered only if the issue was raised by members of Parliament and union level organizations.
Speaker Thura Shwe Mann was replying to the question ofareporter duringameeting with members of Myanmar Journalists Network in Parliament Building in Nay Pyi Taw on Thursday. Also together with Shwe Mann at the meeting were MP’s Aung San Suu Kyi and Thein Swe. “Parliament is responsible for legislative affairs. To makealaw, the union government has to draftabill first. Likewise, MP’s can submitabill. Then, MP’s also have to discuss that bill. This is why we will consider (any proposed law) according to the parliamentary procedures if it is submitted by those concerned,” said Speaker Shwe Mann.
CREDIT EMG 22 JULY 2013